Bogga ugu weyn Liiska Hubinta Marti -geliyaha Airbnb 2022: Ku hel Khibrada ugu Fiican Airbnb
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee lagu noqon karo Airbnb Superhost waa inaad siiso martidaada waayo -aragnimo raaxo leh adoo siinaya wax kasta oo ay u baahan yihiin. Si aad tan si wax ku ool ah u samayso, waxaad u baahan tahay liiska hubinta martigeliyaha Airbnb.
Liiskan hubinta wuxuu u adeegi doonaa hage kaa caawiya inaad siiso martidaada khibradaha ugu fiican. Sababtoo ah sida ay Airbnb -kaaga ugu raaxo badan tahay, ayay u badan tahay inaad ka soo muuqan lahayd raadinta Airbnb ee degaankaaga, kaasoo kuu keeni doona lacag badan.
Sidaas oo kale, mas'uul kama tihid oo kaliya inaad furayaashaada u dhiibto martida; adiguna adiga ayaa mas'uul ka ah sida ay u soo baxaan halkaas. Tani waxay kaa dhigaysaa inaad ka dhex muuqato si togan ama taban waxayna si isku mid ah kuu caawin kartaa ama kaa hor istaagi kartaa inaad noqoto Superhost.
Mulkiile kasta wuxuu go'aansan karaa inuu noqdo Airbnb martigeliyaha, laakiin waxay qaadataa shaqo badan oo dheeri ah si ay u noqoto marti -geliye sare oo Airbnb ah. Xaqiiqdii, in ka yar 3% dadka ayaa loo yaqaan Airbnb super host.
Sidaas si aad u noqoto Airbnb Superhost waa inaad:
Hayso heerka jawaabta 90% ama ka sareeya
Dhamaystir ugu yaraan 10 safar AMA dhammeystir 3 boos celin oo wadar ahaan ugu yaraan 100 habeen ah
Joogtee heerka 1% baajinta (1 baajinta 100 boos celin) ama ka hooseeya, marka laga reebo kuwa ku hoos jira siyaasadeena Duruufaha Dheeraynta
Joogtee 4.8 qiimaynta guud (qiimayntani waxay eegaysaa 365 maalmood ee hore ee dib u eegista, oo ku salaysan taariikhda martidu ka tagtay dib u eegista, maaha taariikhda uu martidu hubiyay)
Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay Superhost ama marti -geliye cusub, tan Airbnb martigeliyaha liiska hubinta ayaa adiga ku khuseeya. Hubi inaad akhrido si aad u ogaato waxaad si fiican u samayn karto ama sii waddo.
Liiska Hubinta Martida ee Airbnb.
Markaad ka fekereyso waxyaabaha muhiimka u ah martidaada, marka hore naftaada geli kabaha. Weydii su'aalo sida.
Maxaan samayn lahaa haddii qolku aanu lahayn qaar ka mid ah shuruudaha aasaasiga ah sida alaabta musqulaha, Aircon, marawaxad, kuleyliyaha, iwm?
Ma bixi lahaa?
Ma joogi lahaa?
Sideen u qiimeyn lahaa meeshaas oo kale?
Jawaabta su'aalahan ayaa kaa caawin doona inaad la timaado liis hubin oo awood kuu siin doona inaad horumariso hantidaada si aad u soo baxdo. Laakin ka hor intaadan go'aansan inaad marto nidaamkaas, halkan waxaa ah liiska hubinta martida loo yahay ee Airbnb si loo horumariyo khibradaada martigelinta.
Maskaxda ku hay in liisaskan hubinta loo qaybiyay iyadoo lagu salaynayo aagagga guriga.
#1. Qolka Jiifka
Tani waa qaybta ugu muhiimsan ee waayo-aragnimada martida. Dhab ahaantii, tani waa dhammaan barta laga helayo Airbnb - si aad u siiso qol jiif wanaagsan oo nasasho leh martidaada.
Markaa waa muhiim inaad ka dhigto mid raaxo leh intii suurtogal ah. Waxyaabaha aad u baahan tahay si ay tani u dhacdo waa;
Joodari wanaagsan, daboolida sariirta, iyo Barkimooyin
Miiska sariirta iyo Lamp
Baakad Cadka ah
Qasaca qashinka yar (oo leh bacaha qashinka)
Qaboojiyaha Hawada, kululeeyaha, iyo/ama Fan
Daboolida sariirta dheeraadka ah iyo Barkimooyinka
Boorsooyinka waxay ku taagan yihiin kabadhada kabaha ee martida aan isla markiiba kala bixin
Dharka la dhigto oo leh ugu yaraan darsin sudhan
Qalinkii iyo Xusuus qorkii
Birta & looxa wax lagu dhejiyo
Shelves/Badbaadada alaabta qiimaha leh tusaale ahaan Baasaboorka
Indho -shareerka iyo dhegaha la tuuri karo
Hypoallergenic + daboolka joodariga aan biyuhu lahayn - Kani waa habka aad uga ilaalin karto joodariga inuu ku wasakhoobo dareere kasta oo aan la rabin.
Waxaad rabtaa inaad yeelato qiimeyn 5-xiddig ah oo aad si tartiib tartiib ah u noqoto Airbnb super host, miyaadan ahayn? Marka, meesha xigta ee si habboon loogu horumariyo liiskan hubinta ee Airbnb waa musqusha.
Kani waa qolka labaad ee martidaadu aad u isticmaalaan. Taas macnaheedu waa inaad u baahan tahay inaad keento xoogaa alaab ah oo dheeraad ah oo weli sii qaboojin doonta martidaada xitaa haddii ay illoobaan kuwa ay leeyihiin.
Qaar ka mid ah walxahan waxaa ka mid ah:
Shukumaanada qubeyska (ugu yaraan 2) iyo/ama shukumaannada xeebta
Shukumaannada wejiga iyo gacmaha
Shaamboo iyo qaboojiye
Musqulaha (suufka fayadhowrka, makiinadaha, ulaha xiirashada, tambuunyada, iwm.)
Shelf si aad u geliso alaabta musqusha.
Qashinka qashinka yar
Caday cusub oo la tuuro
Kursiga musqusha oo lagu hagaajin karo ragga.
Qasabadda qubeyska biyaha kulul
Xargaha rogayaasha ah
Waxaad akhrin kartaa tan si aad u ogaato sida loo akhriyo Noqo marti -geliyaha Airbnb oo samee Lacag badan | TILMAAMAHA UGU FIICAN
Martida joogi doonta wax ka badan hal toddobaad ayaa jikada u isticmaali doona in ka badan kuwa sii joogi doona wax ka yar hal toddobaad.
Si kastaba ha ahaatee, hubi inaad haysato jikada si buuxda u diyaarsan, kaydsan, oo si fiican u horumarsan martidaada. Haddii ay doortaan inay adeegsadaan iyo haddii kale, waxay ku xiran tahay iyaga.
Marka waa kuwan waxyaabaha ugu waaweyn ee martidaada u keeni doona gargaar aad u badan markay ku arkaan jikada.
Saxarada barafka ama Icemaker
Keega shaaha ama kululeeyaha biyaha ama sameeyaha kafeega
Bacaha suuqa ee dib loo warshadeyn karo
Sahayda wax lagu karsado ee aasaasiga ah sida Salt + basbaas, saliid, caagad alwaax, cadaadis,
Sonkor, Caano, Macaan, Subag
Weelasha, digsiyada, suxuunta, sabuuradaha wax lagu gooyo, kuwa wax lagu kariyo, galaaska khamriga, koobabka iyo weelasha qalinka ah
Dhalada, Can, iyo furitaanka khamriga
Sahayda Nadiifinta sida Saabuun, Dareeraha weelka lagu dhaqo, Nadiifiyaha Roogga, Nadiifiyaha Ujeedka oo dhan, jeermis-dilaha, cad-cad, Bacaha Qashinka, Xaaqinka.
Qaboojiyaha- Ma aha in si buuxda loo kaydiyo. Qaar ka mid ah waxyaabaha aasaasiga ah.
Had iyo jeer si toos ah uma aado qolkayga markaan shaqada ka soo noqdo. Waxaan jecelahay inaan tago beerta oo aan ku fadhiisto lulida oo kaliya waxaan dareemayaa neecaw fiidkii oo dhan wejigayga, waxaan maqlayaa shimbiraha heesaya, guud ahaanna waxaan ku raaxaysanayaa cimilada diiran. Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah waxaan ahay qof jecel dabeecadda. Runtii ma sharixi karo.
Si kastaba ha ahaatee, sida Airbnb Superhost, waxaad jeclaan lahayd inaad hormariso qolka nasashada si martida aniga oo kale ah ay u helaan meel raaxo leh oo ay ku nastaan ​​ka dib maalmaha shaqada dheer ama shirarka ama shirarka ganacsiga.
Marka, si aad shaqo wanaagsan u qabato, waa inay jirtaa:
TV caqli badan
Buugaag iyo Majallado
Miisaska iyo noocyada kala duwan ee kuraasta
Netflix ama CableTv
Albaabka shaashadda - Haddii ay dhacdo inaad ku nooshahay jawi diiran halkaas oo laga yaabo in marti uu rabo inuu albaabku furnaado, laakiin ka hortag duqsiga, kaneecada, iyo cayayaanka inay gudaha soo galaan.
#5. Bannaanka Bannaanka
Arrin kale oo ka mid ah liiskan hubinta ee Airbnb waa bannaanka bannaanka. Haddii aqalkaaga Airbnb uu leeyahay meel bannaanka ah, waa inaan laga tagin maadaama martida qaarkood ay rabaan inay adeegsadaan.
Marka, waxaa muhiim ah inaad horumariso bannaankaaga bannaan si aad u qanciso baahida martidaada. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa:
Kuwa ku hadlaya Bluetooth
BBQ leh gaas ama dhuxul la heli karo
Qalab dubitaan oo habboon
Baaskiilka buurta ama doonyaha xeebta
Waxyaalo dheeraad ah
Waxyaabaha soo socdaa ma aha qasab, laakiin lahaanshahoodu wuxuu ku siin karaa gees ka sarreysa martigaliyayaasha kale ee Airbnb wuxuuna kuu beddeli karaa Airbnb Superhost oo macnaheedu yahay lacag badan.
Daaqadaha laba-laaban ee go'doonsan qaylada
Cadaadiska biyaha ee joogtada ah
Dadka akhriya nuxurkaan waxay ku dambeeyaan ogaansho Sida Loo Maalgeliyo Airbnb Sannadka 2022 | Tilmaan-Talaabo Talaabo Talaabo Fudud
Shuruudaha Aad Muhiimka ah
Sanduuqa Gargaarka Degdegga ah (Iyadoo dhammaan shuruudihii la ilaaliyay)
Liiska makhaayadaha ugu fiican aagga
Bajaarrada taleefanka ee Universal ee Android, iPhones, iyo noocyada kale
Beddel -badeedka (loogu talagalay socotada ka baxsan Waqooyiga Ameerika)
Flip -flops ama dacas
Talo Lacag: Hayso Soo -dhaweyn iyo Hadiyad kala tag
Qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu helo hadiyado haba yaraato. Markaad horumarinayso hantidaada si loo waafajiyo dhammaan baahiyaha martida, waxaad sidoo kale ku tuuri kartaa a hadiyad soo dhawoow. Waxay la mid tahay jalaatada. Oo maxaa kale oo ka dhigaya keegga qurux badan haddii uusan ahayn jalaatada?
A hadiyad soo dhawoow waa wax kasta oo aad siiso martida isla marka ay soo galaan gurigaaga halka hadiyad kala tagiddu tahay wax aad siiso martidaada markay ka baxayaan gurigaaga. Waa inay noqotaa ficil la yaab leh martida.
Hadda, ha iga qaldamin maan dhihin waa inaad u tuurtaa xaflad lama filaan ah soo dhaweyn ama hadiyad kala tag, waxaan ula jeedaa inay noqoto wax la yaab leh maxaa yeelay kuma jirto liiska aad ku xayeysiisay Airbnb.
Haddii aad runtii rabto inaad noqoto Airbnb Superhost, waa inaad haysataa qaabkaaga martigelinta gaarka ah tanina waa hal dariiqo oo taas lagu sameeyo.
Hadiyaddaadu waxay noqon kartaa dambiil miro, qaab farshaxan, sanduuq macmacaan ah ama shukulaato, dhalo khamri ah, qiimo dhimis raac, ama wax kasta oo wanaagsan- waa halkaad ku noqon lahayd hal-abuur oo aad la timaadid wax la yaab leh martidaada.
Hubi inaad u dirto kaar saxeexan oo ay weheliso hadiyaddaada si aad u ogeysiiso inaad u qaddarisay inay sii joogaan Airbnb -kaaga.
Si Aad U Sii Ogaato
Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato liiska hubinta martida loo yahay ee Airbnb, waxaad ka hubin kartaa shuruudaha degelka martida loo yahay ee Airbnb adigoo gujinaya badhanka hoose.
Ama waxaad arki kartaa shuruudaha ugu waaweyn si aad u noqoto marti -geliye Airbnb wanaagsan adigoo gujinaya badhankan
Waxaan rajeynayaa in liiskan hubinta martigeliyaha ee Airbnb uu daboolay dhammaan walxaha aad isticmaali karto si aad u horumariso hantidaada oo aad u hesho waayo -aragnimo Superhost iyo sidoo kale inay ku siiso fikrado cusub.
Marka ay timaado inaad noqoto martigeliyaha wanaagsan, waxaad jeclaan lahayd in martidaadu ay khibrad fiican helaan oo ay kuugu dhaafaan qiimeynta 5-xiddig taasoo macnaheedu yahay lacag badan.
Markaa fuushan, sii alaabta aadan liiskan ku lahayn, oo gurigaaga kaxayso si aad u hesho Superhost. Nacasnimo!
Haddii ay jiraan wax aan seegay, si naxariis leh iigu soo sheeg sanduuqa faallada.
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Looga Sameeyo Blog -ga | Eeg Xeeladeena
51 Cuntada Arooska & Fikradaha Cabitaanka Miisaaniyadda
20 Shaqooyin oo bixiya $ 40 saacad ilaa aad ka daasho
Dadka kasbaday kumanaan doolar bishii oo shaqeeya wakhti buuxa ayaa rumaysan kara inay helaan lacag ku filan. Markaad…